I-Dar Romia - I-Villa Coup de Cœur - I-Airbnb
I-Dar Romia - I-Villa Coup de Cœur
Marrakesh, Marrakesh-Safi, i-Morocco
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ghizlane
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Ghizlane izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
"I-Dar Romia", iyindlu enhle esanda kwakhiwa edolobhaneni lase-Berber eliseduze ne-Marrakech.
Lena yindlu eyintandokazi, ejabulela ukubuka okuhle kakhulu kwe-Atlas.
Indlu ikuvumela ukuthi ujabulele ukuzola ngokuphelele, kuyilapho utholakala emizuzwini engu-25 ukusuka edolobheni elimangalisayo lase-Marrakech namamyuziyamu alo amahle kakhulu, amagalari, ama-souks, isikwele esidumile njll. Kubadlali, imisebenzi isesandleni sakho: i-quad, i-buggy, i-jet ski, igalofu. Ukukhetha ukupheka ongakhetha kukho
Esakhiweni se-500 m2, indlu inekamelo elikhulu lokuphumula, elikhanya kakhulu elinekhishi elivulekile elinezinto eziningi: isitofu esikhulu segesi, uhhavini, i-microwave, ifriji elikhulu, umshini wokugeza izitsha, umshini we-Nespresso, i-juicer njll...
Ikamelo lokuphumula linikeza ukufinyelela kwi-terrace, ingadi nendawo yokubhukuda.
Indlu, enendawo ye-220 m2, inamakamelo okulala amakhulu angu-3, 1 esitezi sokuqala no-2 esitezi sokuqala.
Ikamelo lesine – lincane kodwa lihle kakhulu - lizimele engadini. Kungenzeka ukuthi ihlalwe ngumuntu oyedwa.
Ikamelo lokulala ngalinye linegumbi lokugezela lalo elinobhavu, ishawa kanye nendlu yangasese ehlukile yamakamelo okulala angu-3 asendlini kanye negumbi lokugezela elineshawa nendlu yangasese yekamelo lokulala elincane egadini.
Indlu iphinde ibe nendawo enhle esophahleni enokubukwa okumangazayo okungu-360°.
Indawo yayo iphinde inikeze isisekelo esihle sohambo oluningi: ukuvakashela i-Ourika Valley kanye nemizana ye-Berber Atlas, uhambo oluya e-Ouarzazate, ukuhlola i-Agafay Desert, usuku e-Essaouira ne-medina yayo enhle, ama-ramparts kanye nebhishi.
Ukushintsha kwezindawo, ukuphila okuthulile enkabeni yedolobhana lase-Berber lezakhamuzi ezingu-1000, kuyilapho unethezekile ngokuphelele. Ukungena kungomgwaqo onamavili wamakhilomitha angu-1.5 bese kuba nomzila oqhekekile wamakhilomitha ANGU-400. Imizana inhle kakhulu, futhi iyamukeleka. Ukumomotheka,ukungenisa izihambi, imvelo ngamagama ayinhloko ku-Tagadirt. Ekuthengeni edolobhaneni kukhona "izitolo zokuthenga" ezincane, "ezitolo zeminyango" kukhona i-Carrefour yemizuzu engu-25 kude noma imakethe ye- "Souk" kabili ngeviki ngoLwesihlanu, ngeSonto imizuzu engu-10 ukusuka edolobhaneni. Sinezindawo zethu eziyintandokazi eziseduze kokuthi "umhlahlandlela". Hlela ukudla okukhulu, ngaphandle kwalokho singathumela othile ukuba ayinakekele.
Siyakuhlonipha ukuthula kwezivakashi zethu
Kodwa nakanjani sizohlezi sitholakala uma kudingeka nge-imeyili, i-SMS, noma nge-WhatsApp
Ukunaka! Asivumeli noma yimaphi amaphathi noma izivakashi ezengeziwe